कुलमानको आग्रह : सके जति बिजुली खपत गर्नुहोस् व्यवस्थापनको जिम्मा म लिन्छु - Sidha News
कुलमानको आग्रह : सके जति बिजुली खपत गर्नुहोस् व्यवस्थापनको जिम्मा म लिन्छु
तीन वर्षअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेतृत्वमा आएका कुलमान घिसिङले तत्कालै लोडसेडिङको अँध्यारोबाट जनतालाई मुक्त गराएका थिए। त्यहीँदेखि चुलिएको उनको चर्चा अझैसम्म सेलाएको छैन। उनको व्यवस्थापकीय कौसलले कहिल्यै नबन्नेजस्तो देखिएका रुग्ण विद्युत् आयोजनाले समेत प्रगतिको ‘इन्डिकेटर’ देखाउन थालेका छन्। सबस्टेसन, प्रसारणलाइन निर्माण र विस्तारले तीब्रता पाइरहेका छन्। त्यति मात्र होइन सधैँ घाटा रहने प्राधिकरण नाफामा गएको छ। यस अर्थमा एउटा सरकारी संस्थानको कायपलट गरिदिएका छन्।
विद्युत् चुहावट घटाउनदेखि लोडसेडिङ हटाउनसम्म नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका उनै घिसिङसँग नेपालखबरले प्राधिकरणमा उनका तीन वर्ष र आगामी योजनाबारे गरेको सम्वादः
प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकको रुपमा तीन वर्ष पूरा गर्नुभएको छ। यो बीचको अनुभव कस्तो रह्यो?
ठूलो चुनौतीको रुपमा म प्राधिकरणमा कार्यकारी भूमिकामा आएको थिएँ। बिजुली आपूर्ति गर्नुपर्ने संस्थाले दैनिक १४ घन्टा लोडसेडिङ गर्नुपर्दा अवस्था दुःखद थियो। प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था पनि नाजुक थियो। वर्षिक करिब नौ अर्बको खुद नोक्सानीमा थियो। धेरै झन्झट, अप्ठ्यारोले घेरिएको र चुनौतीका चाङ माझ मेरो नियुक्ति भएको थियो। हुन त जहाँ समस्या बढी हुन्छ, अवसर पनि त्यहीँ धेरै हुँदो रहेछ। गरेको काम देखिँदो रहेछ।
कामचाहिँ कहाँबाट सुरु गर्नुभयो?
हामीले सुरु गरेको भनेको चुहावट रोक्नबाट हो। विद्युत् चुहावट नेपालमा अत्यन्त धेरै रहेको थियो। त्यही कारण विद्युत् आपूर्तिमा ठूलो समस्या थियो। त्यो बेला कुल खपतको २६ दशमलव ७८ प्रतिशत विद्युत चुहावट भइरहेको थियो। अहिले त्यो अंश १५ दशमलव ३२ प्रतिशतमा झारेका छौँ। यो भनेको १० दशमलव ४६ प्रतिशतले चुहावट घटेको स्थिति हो। चुहावट १ प्रतिशत घटाउनु भनेको करिब ७० करोड रुपैयाँ बचत हुनु हो। यो चुहावट घटाउनु भनेको प्राधिकरणभित्रको व्यवस्थापन मिलाउनु पनि हो। सुरुवाती काम कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि प्रशासनिक सुधार ल्याउनेसम्मका थिए। सबै काम गर्ने भनेको त कर्मचारीहरुले नै हो। त्यो काम हामीले गरेका हौँ। पुरा पढ्नुहोस …